Girgirii ?warri Amaaraa uumaa jiru kun kan bara filmaata 2005 (97) saniin wal fakkaata!! - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGirgirii ?warri Amaaraa uumaa jiru kun kan bara filmaata 2005 (97) saniin wal fakkaata!!
Warri Amaaraa uumaa jiru kun kan bara filmaata 2005 (97) saniin wal fakkaata. Gaafas Mallas Zeenaawiitu lubbuu jedhee irra ejjetee biyyeetti deebise. Gaafas akka lama turan. Tokko warra finxaaleyyii kan Wayyaanee buqifnee aango qabanna jedhee owwaara kaasee fi fi warra laalcha giddu galaa Wayyaaneef harka kennatee bulu qabu turan. Har’a alaan yeroo laalaman akka lamatti kan hiriiran haa fakkaatan malee hunduu kaayyoo tokko irratti wal tahu. OPDO kaballaanis tahuu hooksaan karaa irraa maqsanii bakkatti deebi’uu dha. Akka gaafa Wayyaanee sodaatanii sana OPDO jalatti buluu kan hayyamu jara keessa hin jiru. OPDOnis dhaaba lafee eenyummaa qabdu tan akka Wayyaanee akka hin tahin ni beeku. Oromoo wajjin wal dhabsiisanii qilleensa irratti hambisuu isaanii mirkaneeffataniiru. Yaaddoo kana hambisuuf duraan akka ummanni keenya OPDO faana hiriiree jabeessee onnachsee falmachiisu dhiibaa turre. OPDOn galatas tahee sabboonummaa, ejjennoos tahee onnee ittiin ORomoo abdattee dhaabattee falmitu akka hin qabne amma gochaa jaraa hanga ammaa agarreen mirkaneeffanneerra.
Kanaafuu Oromoo humna isaa qofa abdachuu qaba. Yoo xiqqaate Oromiyaa keessatti caasaa jiru hunda toyachuun dirqama. Nagaanis tahu humnaan Oromiyaa irratti abbaan Oromoo tahuun oduudhaan osoo hin taane wareegama kamiinuu mirkanaawuu qaba. Akkuma Tgiraay deemanii ol jedhanii ija wayyaanee keessa laaluu hin dandeenye Oromiyaa keessatti Oromoo ija tuffiin laaluun umrii akka nama gabaabsu itti himamuu qaba. Jaalalaa fi nagaaf malee jibbaa fi tuffiif obsa akka hin qabne itti garsiisuu feesisa. Oromoon hundi dirqama eenyummaa isaa kabasiisuuf of qopheessuu qaba.
Via Gadisaa Margaa
#Breaking news .
#Oduu ammee .
Oromiyyan rakko cimaa keessa galtee jirti Motumman OPDO kufuunshi hin oluu jeedhu .
Harargren dandii cufuu caalqabee jirra .
yeroo kana Gondar university baratan Oromon campusi keessa Fannoo dhan reebamaa jirra .
Kuni waldiya universitii dha .
Ganamaa kana .